आज सोनिकाले पुर्वयुवराज पारशलाई फोन गरिन् ? (भिडियो) – Dainik Sangalo
आज सोनिकाले पुर्वयुवराज पारशलाई फोन गरिन् ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३०, २०७८ समय: ११:४७:५४
कुनै समय पारश शाहसँग निकट देखिएकि मोडल, भिजे एवं व्यवसायी सोनिका रोकायाले एक अन्तर्वार्तामा पुर्वयुवराजको बारेमा केहि कुरा सार्वजनिक गरेकि छिन् । धेरै समयपछि सोनिकाले पुर्वयुवराजसँगको सम्बन्धका बारेमा खुलासा गरेकि हुन् । पछिल्लो समय व्यवसायमा संलग्न रहेकि सोनिकाले सिनामंगल तारा हल चोकमा रहेको फिनिक्स ब्युटिपार्लर पारशकै हातबाट उद्घाटन गराएकि थिइन् । अहिले उक्त चोकनै सोनिकाका कारण्ण चर्चामा छ । किनभने, त्यहाँ धेरै सेलिब्रेटिहरु आउने गरेका छन् ।
सोनिकाले पारश आफ्नो गुरु भएको र सधैँ गुरुनै रहने बताइएकि छिन् । पारशले गर्दा भगवान्, आध्यात्म र प्रकृतिलाई नजिकबाट स्पर्श गर्न पाएको सोनिकाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उहाँले गर्दा नै जिन्दगीको अर्थ बुझ्न सहयोग भएको छ ।’ पारशको बारेमा बोल्दा नकारात्मक प्रचारप्रसार हुने भन्दै आफूलाई बोल्न मन नलाग्ने सोनिकाले बताइन् । पारशको बारेमा धेरै प्रश्न नर्गा साक्षात्कारकर्तालाई उनले आग्रह गरिन् ।
कन्ट्रोभर्सी निकाल्न नखोज्नु भन्दै धेरै प्रश्न नगर्न उनले आग्रह गरेकि थिइने । तर, उनले पारशसँग नजिक भएका कारण प्रश्न सोधेको भन्दै पारश र आफ्नो सम्बन्ध राम्रो रहेको बताइन् । ‘मैले सम्मान गर्छु । फेरि २४ घण्टा भेट्दा अरुको दिमाग खराब हुन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘खोट त सबैमा देखिन्छ । हामीले सधैँ सपोर्ट गर्नुपर्छ । उहाँले दिने ज्ञान मलाई सकारात्मक लाग्छ । ’
उक्त अन्तर्वार्तामा सोनिकाले जिन्दगि भनेको परिवर्तनशिल हुनुपर्ने भन्दै आफ्नोे फरक फरक रुप समयको माग भएका बताइन् । उनले भनिन्, ‘म कतिबेला के गर्छु मलाई नै थाहाहुदैँन । म साधारण मान्छे जसरी जिन्दगि बिताउन चाहादिन । आत्म सन्तुष्टकालागि योग ध्यान आवश्यक छ । आत्मीय दर्शनले आफूलाई सकारात्मक शक्ति दिएको छ । गृहजिल्ला बझाङमा छोटो कपडा लगाउन आफूलाई मन लाग्दैन ।’
देश अनुसारको भेष भन्दै उनले दिमागबाटै छोटो लुगा नलगाउ भने जस्तो लागेको बताइन् । यसपालिको तीजमा वर्त बस्ने विचार गरेको भन्दै उनले भोक लाग्यो भने खान सक्ने बताइन् । उनले वर्त बस्न कोशिश गर्ने बताइन् । अहिले सम्म आफ्नो विवाहको कुरा नचलेको उनले बताइन् । आफू प्रेममा नरहेको र एकल जिन्दगी बिताइरहेको उनले अन्तर्वार्तामा बताइन् । उनले आफ्नो श्रीमान ख्याल गर्ने, बुझकि, रक्षा गर्ने, समय दिने हुनुपर्ने बताइन् ।
प्रश्नकर्ताले बारम्बार पारशकै प्रश्न सोधेपछि सोनिकाले फोन गर्दै, ‘हल्लो सरकार कट्टा लिएर आउ त’ भनेर हाँसेकि थिइन् । पारशको बारेमा सोनिकाले के भनिन् ? २५ मिनेट देखि पारशको बारेमा बोलेकि छिन् । हेरौँ भिडियो
Last Updated on: August 14th, 2021 at 11:47 am